दैनिक अनुलोम-विलोम अभ्यास गर्दा फाइदै फाइदा - Health Aawaj -ahealth news portal in Nepal
गृहपृष्ठ ∕ योग ∕ दैनिक अनुलोम-विलोम अभ्यास गर्दा फाइदै फाइदा
दैनिक अनुलोम-विलोम अभ्यास गर्दा फाइदै फाइदा
हेल्थ आवाज बुधबार, २०७८ फागुन ४ गते, ०५:३० मा प्रकाशित
शरीरको समग्र स्वास्थ्यलाई स्वस्थ राख्न योगासनको नियमित अभ्यास गर्नुपर्दछ । यसमा पनि प्राणायामको अभ्यास गर्नु तपाईको लागि विशेष लाभदायक हुन सक्छ। अनुलोम-विलोम योगको अभ्यासलाई स्वास्थ्य विज्ञहरू निकै लाभदायक मान्छन् ।
मानसिक र शारीरिक स्वास्थ्य राम्रो कायम राख्नुका साथै शरीरमा सकारात्मक उर्जाको संचार हुनुका साथै अनुलोम-विलोमको अभ्यासले तपाईका लागि धेरै रोगहरूको जोखिम कम गर्न विशेष लाभदायी हुन सक्छ। यो श्वास फेर्ने अभ्यास सबै मानिसहरूका लागि सुरक्षित मानिन्छ। यद्यपि, केही परिस्थितिहरूमा यसलाई विशेषज्ञको सल्लाहको आधारमा मात्र अभ्यास गर्न उपयुक्त मानिन्छ।
अनुलोम-विलोम योग एक विशेष प्रकारको नियन्त्रित श्वास अभ्यास (प्राणायाम) हो। योग विज्ञहरूका अनुसार दैनिक अभ्यास गर्ने व्यक्तिहरूले तनावको समस्या कम गर्छ र यसले श्वासप्रश्वास र रक्तसञ्चारलाई राम्रो बनाउन पनि मद्दत गर्छ। यो योग दैनिक अभ्यास गर्दा हुने स्वास्थ्य लाभका बारेमा जानौं।
अनुलोम-विलोम योग कसरी अभ्यास गर्ने?
विज्ञहरूका अनुसार यो आसन गर्नका लागि सबैभन्दा पहिले शरीरलाई सीधा राखेर ध्यानपूर्वक बस्नुहोस्।
देब्रे हातले ज्ञान मुद्रा बनाउनुहोस् ।
दाहिने हातको औंलाले दाहिने नाकको प्वाल बन्द गर्नुहोस् र देब्रे नाकबाट श्वास लिनुहोस्।
अब देब्रे नाकको प्वाल बन्द गर्नुहोस् र दाहिने नाकको प्वालबाट श्वास छोड्नुहोस्।
अब यो कार्य अर्को नाकको प्वालसँग दोहोर्याउनुहोस्।
कुनै पनि योगबाट अधिकतम लाभ लिनको लागि यसको सही अभ्यास गर्नु सबैभन्दा आवश्यक मानिन्छ।
अनुलोम-विलोमका फाइदाहरू के हुन्?
यो अभ्यासले हृदय समस्या, गम्भीर अवसाद, उच्च रक्तचाप, बाथ, माइग्रेन जस्ता धेरै गम्भीर स्वास्थ्य विकारहरूको पीडा कम गर्ने विभिन्न अनुसन्धानहरूले देखाएको छ।
योग विज्ञहरूका अनुसार अनुलोम-विलोमको अभ्यास सही तरिकाले गरिएमा यसबाट धेरै स्वास्थ्य लाभ हुन सक्छ।
दम, ब्रोन्काइटिस जस्ता श्वासप्रश्वास सम्बन्धी समस्याको लक्षण निको पार्न यो लाभदायक मानिन्छ।
नकारात्मक विचारहरू हटाउन मद्दत गर्दछ।
सोच सकारात्मक बन्छ र तपाईं क्रोध, बिर्सने, बेचैनी र निराशा जस्ता नकारात्मक भावनाहरूबाट टाढा रहनुहुन्छ।
यस प्राणायामको अभ्यासले एकाग्रता, धैर्यता, ध्यान, निर्णय क्षमता बढाउँछ।
शरीरका तीनवटै दोषहरू वात, खोकी र पित्तलाई सन्तुलनमा राख्छ।
तौल घटाउन मद्दत गर्छ र चयापचय नियमन गर्छ।
स्वाभाविक रूपमा छाला चम्किलो हुन्छ।
अनुलोम विलोम स्वास्थ्यका लागि सुरक्षित मानिन्छ। कुनै पनि कुनै ज्ञात जोखिम वा नकारात्मक प्रभावहरू अध्ययनहरूमा जिकिर गरिएको छैन । योगको सही तरिका जान्न, प्रशिक्षित योग शिक्षकको सल्लाह लिनुपर्छ। यदि तपाई पहिले नै कुनै गम्भीर रोगको शिकार हुनुहुन्छ भने, यो योग अभ्यास गर्नुअघि निश्चित रूपमा डाक्टरसँग परामर्श लिनुहोस्।